Crossword puzzle - i puzzle okuthakazelisayo futhi ewusizo kakhulu. Ososayensi bakholelwa ukuthi leli prototypes siqala I-IV leminyaka. Lokhu kufakazelwa, ikakhulukazi, ukuthi ngesikhathi kumbiwa e-yasePompeii edume Kuye kwatholakala okufana kakhulu puzzle zabo. Thola yaphuma ngo '79 BC.
I-crossword lokuqala efanayo, okuhambelana imibono yesimanje, yasungulwa yindoda egama layo u-Artur Uinn wabekwa edition NgeSonto "New York Umhlaba" iphephandaba ekupheleni kuka-1913.
Manje akhuphuke ukudweba iphazili yakho wonke umuntu can. Yini okudingeka? Esikhathini esithile free, umbono ezithakazelisayo, futhi yebo, isifiso sakho. sizama ukuthola ndawonye kulesi sihloko ukuze iphazili yekuphambanisa eZwini - ethandwa sombhalo ka-Microsoft Office.
Isinyathelo 1. Yakha ithebula
Vula MS Word bese uchofoza kuthebhu "Faka" -> "Uhlu". Njengoba uzobona into "Faka Ithebula" kwimenyu pop-up. Chofoza le nkinobho.
Isikrini izoveza ewindini elisha lapho ungakwazi babela ipharamitha ikusasa etafuleni: inombolo bese ububanzi amakholomu, inani lemigqa.
On inani kanye nemigqa kuzoncika usayizi crossword zakho zesikhathi esizayo. Ngokuvamile, ukuze singalahlekelwa, kangcono beveza imibuzo bese udweba layout puzzle azayo ephepheni: ngakho ungakwazi ukuthi njalo ubone ukuthi yini kufanele kube sekupheleni.
Ake sithi unquma ukuthi udinga ithebula 10x10 amaseli. Ake sihlole, indlela ukwenza iphazili yekuphambanisa eZwini, ngayo nje isibonelo esinjalo. Amasimu "inani lemigqa" futhi "inani lamakholomu" Udinga ukufaka inombolo 10. Ngokuphathelene ububanzi, kungcono ukusetha inkinobho ukuze "njalo", futhi eduze, esikhundleni "Auto" ufake inani kusuka 0.5 kuya 0.6 cm - ngakho-cell ngokushesha libe yisikwele.
Isinyathelo 2: Shintsha izinketho ithebula
Siyaqhubeka ukubhekana kanjani ukwakha iphazili yekuphambanisa eZwini. Ngakho, etafuleni luvele esibukweni. Kodwa, njengoba ungabona, mncane kakhulu. Move igundane ekhoneni elingezansi kwesokudla ithebhulethi ukubonisa umcibisholo idayagonali, ubambe ukhiye we-Shift futhi idonsele usayizi oyifunayo.
Ukuqhafaza igundane on ekhoneni elingakwesobunxele, ungahambisa etafuleni eshidini, isibonelo bawubeke isikhungo.
Ngemva kwalokho kudingeka ushintshe ukushuba umngcele. Khetha into lilonke. Ngo phezulu imenyu isikrini ithebhu ophuzi "Ukusebenza Amathebula" lapho ukhetha "Isakhiwo" likhona. Vula futhi ngokwedlulele kwesokunxele iphuzu "Table", khetha inkinobho "Properties". Ngo ewindini elivelayo, kudingeka chofoza "Amabhoda wokufiphaza ..." bese ukushintsha ububanzi umngcele 1.5 NM, bese ugcine izinguquko zakho.
Isinyathelo 3: Dala isakhiwo
Siyaqhubeka baqonde indlela ukwenza iphazili yekuphambanisa eZwini. Buyela emuva ithebhu "Ekhaya" futhi uthole into "Imingcele". Lapha sidinga ukukhetha ezimbili okufanele akhethe kuzo: "Akunamingcele" futhi "Bonisa igridi". Ngemva kwalokho, ukubonisa sibonisa kuphela isevisi wokugubha, engeke kuzobonakala uma ezinyathelisiwe.
Isinyathelo 4. Ukulingana izimpendulo
Manje, ukuze uqonde ukuthi ngeke bheka owaphrinte ayigcwalisa iphazili yekuphambanisa, udinga ukufaka izimpendulo ezifanele emasimini ezifanele futhi bethela olunezinombolo.
Uma wenza lokhu, nenani izinkinga kumele esabiwe, futhi ukushintsha uhlobo uhlamvu "umbhalo ongenhla". Lokhu kungenziwa kuthebhu eyinhloko esimisweni, yindawo efanako nalapho sikuguqule uphawu ngokugqamile, ukudwebela, nokunye. D.
Ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba qondanisa ububanzi imigqa namakholomu. Ukuze wenze lokhu, khetha i-tablet, chofoza inkinobho yegundane kwesokudla bese uthole ithuba elifanele kusuka kwimenyu yokuqukethwe.
Isinyathelo 5. Lungisa crossword puzzle ukushicilelwa
Dala puzzle ama-crossword eZwini sekuseduze kokuqedwa. The main yomsebenzi esesiyenzile kakade. Manje singakwazi kuphela ukuhlonza Imingcele akahlale inqubo zokunyathelisa. Ukuze wenze lokhu, thina yanjalo ukhethe igama ngalinye, bese ajwayelekile "Imingcele" ithebhu e kwimenyu enkulu yomhleli, ukhethe into "Yonke imingcele."
Isinyathelo 6. Finishing kuthintwa
Empeleni, kakade indlela ukwenza iphazili yekuphambanisa eZwini. Kwakukhona kuphela ambalwa imininingwane. Ukuze ubone ngaphambi kokuphrinta izobukeka iphazili, ukulungele ukubhekana, khetha lonke etafuleni, futhi ungakhethi into "Bonisa igridi" ku "Imingcele" ithebhu. umugqa Asizayo uzonyamalala futhi uzobona kuphela puzzle ama-crossword. Ukuze ugweme ukudideka, kungcono ukuba uzitholele nje uma zombili izinguqulo - ne izimpendulo ezibhaliwe futhi ngaphandle kwabo. Ukuze kube lula imibuzo zingafakwa ishidi efanayo puzzle ngokwayo.
Ungase ukwazi ukwandisa usayizi wefonti kuya izinombolo kwaba ebonakalayo kangcono.
Ukuze ubone ukuthi yini thina sishiye ekugcineni, nokuthi ingabe uyafisa yini sasazi ukuthi kufanele uwubeke puzzle ama-crossword eZwini, ungaya ithebhu "Buka" ngaphambi ukunyathelisa -> "Isilinganisi" e ewindini elivelayo, ucacise "ikhasi lonke". Manje ungabona izithelo zomsebenzi wabo ncamashí ngendlela wona acabanga izovela ukuphrinta.
Izwi lokuncoma iseluleko: uma puzzle senziwa ngendlela yokuthi izinhlamvu ngazinye Ngamanye amazwi wenze entsha - Ukhiye, ungakhetha amaseli oyifunayo ngombala ohlukile, khetha yamathuluzi main "Gcwalisa" ithuluzi, futhi ucacise umthunzi ezifanele.
MS Access. MS Access egciniwe. MS Access 2007
Zabesifazane Syech - ukuthenga izinto ezilungile